ကုရ်အာန်က ကမ္ဘာပြားသည်ဟု ပြောထားပါသလား? | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကုရ်အာန်က ကမ္ဘာပြားသည်ဟု ပြောထားပါသလား?
ကုရ်အာန်က ကမ္ဘာပြားသည်ဟု ပြောထားပါသလား?အမေး။ ။ ကုရ်အာန်ထဲမှာ အလ္လာဟ်က ဒီကမ္ဘာကြီးကို သင်တို့အတွက် ကော်ဇောတစ်ခု အဖြစ် ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ ပြောထားတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးကပြားနေတယ်လို့ ဆိုလိုတာပဲပေါ့။ ဒီတော့ ဒါက ခေတ်သစ်သိပ္ပံက ဆိုထားချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ရာ ရောက်မနေဘူးလား။
(၁) မြေကမ္ဘာကို ကော်ဇောတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ထားသည်။ဒီမေးခွန်းက ကုရ်အာန်ကျမ်းလာ စူရာဟ် နူးဟ်က အာယသ်တစ်ခုကို အခြေခံပြီး ပေါ်လာခဲ့တာပါ။
“အလ္လာဟ်အရှင်က အသင်တို့အတွက် မြေကမ္ဘာကို ကော်ဇောတစ်ခုအဖြစ် (ဖြန့်ကြက်) ဖန်ဆင်းထားတော်မူ၏။” (အလ် ကုရ်အာန် – ၇၁း၁၉)
ဒါပေမဲ့ အထက်ပါအာယသ်ထဲက ဝါကျက မပြည့်စုံသေးပါဘူး။ နောက်က ဆက်လာတဲ့ အာယသ်ကျမှ ရှေ့ကအာယသ်ကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
“သို့မှသာ အသင်တို့သည် ယင်းပထဝီမြေ၏ လမ်းကျယ်များဝယ် သွားလာနိုင်ကြကုန် အံ့သတည်း။” (အလ် ကုရ်အာန်- ၇၁း၂၀)
အလားတူ သတင်းစကားကိုပဲ စူရာဟ်တွာဟာမှာလဲ ထပ်ပြီး ပြောထားပါသေးတယ်။
“ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင် ပထဝီမြေကို အခင်းအကျင်း ပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏ ။ ၎င်းအပြင် ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင် ယင်းပထဝီမြေ၌ အသင်တို့အဖို့ လမ်းများကိုလည်း ပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏။” (အလ်ကုရ်အာန်- ၂၀း၅၃)
မြေကမ္ဘာရဲ့အပေါ်ယံလွှာက အထူအားဖြင့် မိုင် ၃၀ တောင်မှမရှိပါဘူး။ မိုင်ပေါင်း (၃၇၅၀) မိုင်လောက်ရှိတဲ့ မြေကမ္ဘာရဲ့ အချင်းဝက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အင်မတန်မှပဲ ပါးလွှာလှပါတယ်။ မြေ ကမ္ဘာရဲ့ ပိုပြီးနက်ရှိုင်းလှတဲ့ အလွှာတွေက အင်မတန်မှ ပူပြင်းလှတဲ့ အရည်တွေဆိုတော့ ဘယ်လို သက်ရှိပုံစံကမှ မဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါဘူး။ မြေကမ္ဘာရဲ့အပေါ်ယံလွှာက အခဲဖွဲ့နေတဲ့ အခွံလွှာဖြစ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ကြတာပါ။ကုရ်အာန်က ဒါကို ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ကော်ဇောတစ်ခုအဖြစ် အမှန်အကန်ပဲ ရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က ဒီအပေါ်မှာ လမ်းအမျိုးမျိုး အပေါ်မှာ ခရီးဆန့် သွားလာနိုင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ကော်ဇောကို ပြားသောမျက်နှာပြင်ထက် တစ်ခြားအပေါ်မှာလည်း ဖြန့်ကြက် ခင်းကျင်း ထားနိုင်ပါသည်။
ကုရ်အာန်ရဲ့ ဘယ်အာယသ်တစ်ခုတစ်လေမှာမှ ကမ္ဘာကပြားတယ်လို့ ပြောမထားပါဘူး။ ကုရ်အာန်က မြေကမ္ဘာရဲ့အပေါ်ယံလွှာကို ကော်ဇောတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောဆိုထားတာဖြစ်တယ်။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ ကော်ဇောဆိုတာ လုံးဝပြားနေတဲ့ မျက်နှာပြင်မျိုးပေါ်မှာသာ ခင်းလို့ရမယ် လို့ ထင်နေကြပါတယ်။ ကော်ဇောတစ်ခုကို ကမ္ဘာမြေလိုကြီးမားလှတဲ့ ထုလုံးပေါ်မှာလဲ ခင်းလို့ရ နိုင်ပါတယ်။ ကြီးမားလှတဲ့ကမ္ဘာလုံးပုံစံပေါ်မှာ ကော်ဇောတစ်ခုကို အလွယ်လေး ခင်းနိုင်တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကော်ဇောကို ပြင်ညီတစ်ခုအပေါ်မှာတော့ ယေဘုယျခင်းလို့ ရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်လို့ သိပ်ပြီးအဆင်မချောလှတဲ့ပြင်ညီပေါ်လဲခင်းလို့ရပါတယ်။ကုရ်အာန်က ကမ္ဘာရဲ့အပေါ်ယံလွှာကိုသာ ကော်ဇောတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါသာမရှိရင် ဒီအောက်က အပူဒဏ်ပြင်းလှတဲ့ အရည်တွေကြောင့် အသက်ရှင်နိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဘေးဥပဒ်မကင်းတဲ့ဝန်းကျင်ကြီး ဖြစ်နေတာ ကြောင့်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကုရ်အာန်ဟာ ယုတ္တိဗေဒနည်းကျရုံသာမက ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာ တော့မှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြရတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်တွေကိုပါ ဖော်ပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။
(၃) မြေကမ္ဘာကို “အခင်း” အဖြစ် ပြုလုပ်ထားသည်။
အလားတူပဲ ကုရ်အာန်ထဲမှာ အာယသ်များစွာမှာပဲ မြေကမ္ဘာကို အခင်းလုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
“ထို့အပြင် ငါအရှင်သည် မြေကမ္ဘာကို (ကျယ်ပြန့်စွာ) ခင်းကျင်းထားတော်မူ၏။ အဘယ်သို့ တိကျစွာ ခင်းကျင်းထားဘိသောအရှင် ပါနည်း။” (အလ် ကုရ်အာန်-၅၁း၄၈)
အလားတူပဲ ကုရ်အာန်ရဲ့ တစ်ခြားအာယသ်အများအပြားမှာပဲ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကျယ်ပြောလွန်း ပုံကို ဆိုထားပါတယ်။
“ငါအရှင်မြတ်သည် ပထဝီမြေကို အင်မတန် ကျယ်ဝန်းစွာနှင့် တောင်များကို သပ်များ အဖြစ်နှင့် လုပ်ထားတော်မူသည် မဟုတ်လော။” (အလ် ကုရ်အာန်- ၇၈း ၆-၇)
ကုရ်အာန်ရဲ့ ဒီအာယသ်တော်တွေထဲက ဘယ်အာယသ် တစ်ခုတစ်လေမှာမှ ကမ္ဘာကြီးကို ပြားတယ်ရယ်လို့ တစ်စက်ကလေးတောင်မှ ညွှန်းမထားပါဘူး။ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ကျယ်ဝန်းလှပုံကိုသာ ပြောထားတယ်။ မြေကမ္ဘာရဲ့ ကျယ်ဝန်းပြန့်ပြောမှုရဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုပဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။
“အို…..ယုံကြည်ကြကုန်သော ငါ၏ကျေးကျွန်တို့၊ ငါအရှင်မြတ်၏ ကမ္ဘာမြေသည် လွန်စွာ ကျယ်ဝန်းလွန်းလှသည်။ ထို့ကြောင့် အသင်တို့သည် ငါအရှင်မြတ်ကိုသာ (ငါအရှင်တစ်ပါးတည်းကို သာလျှင်) ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ကြကုန်လော့။” (အလ် ကုရ်အာန်- ၂၉း၅၆)
ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအားပယောဂကြောင့် သူ့အနေနဲ့ ကောင်းတာကိုမလုပ်တော့ပဲ မကောင်းတာကိုပဲ ဇွတ်တိုးမိရတာပါဆိုပြီး ဘယ်သူကမှ ဆင်ခြေပေးလို့ မရပါဘူး။
(၄) မြေကမ္ဘာ၏ ပုံသဏ္ဍာန်သည် ထုလုံးပုံ ဖြစ်သည်။
ကုရ်အာန်က ကမ္ဘာမြေရဲ့ တကယ့်ပုံသဏ္ဍာန်ကို အောက်ပါအာယသ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
“ငါအရှင်သည် မြေကမ္ဘာကို ဥသဏ္ဍာန် ပြုထားတော်မူ၏။” (အလ် ကုရ်အာန်- ၇၉း၃၀)
အရဗီဝေါဟာရ “ဒဟားဟာ”က ဥပုံသဏ္ဍာန်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဖြန့်ကြက်ခင်းထား ချက်လို့လဲ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။”ဒဟားဟာ” က “ဒုဟီးယာ” ကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ငှက်ကုလားအုတ်ရဲ့ဥကို ရည်ညွန်းပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ တစ်ထပ်တည်း တိတိကျကျတူတဲ့ ထုလုံးပုံသဏ္ဍာန် ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကုရ်အာန်နဲ့ ခေတ်သစ်သိပ္ပံတို့ဟာ လုံးဝဥဿုံ တစ်ထပ်တည်းကိုက်ညီနေပါတယ်။
← ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းနည်း(သို.)တရားဥပဒေစိုးမိုးေ၇းနှင့်လူနည်းစုအပေါ် လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကိုတည့်တည့်ကြည့်ခြင်း (ဒုတိယပိုင်း)
ကျွန်မ ချစ်တဲ့ ပြည်မြန်မာ →